Ụlọ Obibi Casa Lupita na-akwụ maka ihe mgbe ochie na-ewu ụlọ nke Merida, Mexico na agbata ya. Oru ngo a metụtara mweghachi nke casona, nke a na-ewere dika ihe nketa, ya na ihe owuwu ulo, ime, ihe eji eme ulo ya. Ebumnuche nke ọrụ ahụ bụ ngwakọta nke ọchịchị na ihe owuwu nke oge a.
Ụlọ Akwụkwọ Cifi Donut
Ụlọ Akwụkwọ Cifi Donut CIFI Donut Kindergarten ka a na-ejikọ ya na ime obodo. Iji mepụta ebe agụmakwụkwọ ụlọ akwụkwọ ọta akara na-etinye ihe omimi na ịma mma, ọ na-agba mbọ ijikọ ohere ịzụ ahịa yana ohere agụmakwụkwọ. Site na nhazi mgbanaka na-ejikọ oghere nwere akụkụ atọ, ụlọ na odida obodo jikọtara ọnụ, na-etolite ebe ọrụ jupụtara na-atọ ụtọ na uru mmụta.
Ụlọ Oriri Na Ọ Restaurantụ Isụ Mpaghara ọrụ dum dị oke ọnụ, ụgwọ ọkụ eletrik na mgbanwe mmiri na ikuku ikuku dị elu, yana akụrụngwa kichin ndị ọzọ na akụrụngwa, yabụ mmefu ego dịnụ na ịchọ mma oghere dị n'ime ụlọ amachaghị nke ukwuu, yabụ ndị na-ese ihe na-ewere “ okike mara mma nke ụlọ ahụ n'onwe ya & quot;, nke na-eweta oke ịtụnanya. Edoziwo ụlọ ahụ site na ịwụnye ọkụ ọkụ dị iche iche n’elu n’elu. N'ehihie, anwụ na - enwu site na mbara igwe.
Restaurantlọ Oriri Na Ọ Jaụụ Japan Na Ụlọ Mmanya
Restaurantlọ Oriri Na Ọ Jaụụ Japan Na Ụlọ Mmanya Dongshang bụ ụlọ oriri na ọ Japaneseụ Japaneseụ Japan na ụlọ mmanya dị na Beijing, nke achara nwere ya n'ụdị na nha dịgasị iche iche. Ọhụụ ngo a bụ ka e mepụta ebe iri nri pụrụ iche site na ijikọ ọnụ ndị Japan na ihe ọdịnala ndị China. Ngwa ọdịnala nke nwere njikọ siri ike na nka na omenaala nke mba abụọ ahụ na-ekpuchi mgbidi na ulọ elu iji mepụta ambience. Akụrụngwa na-adịgide adịgide na-anọchi anya nkà ihe ọmụma obodo mepere emepe na akụkọ akụkọ ọdịnala China, Sevenzọ Asaa nke Bamboo Grove, ma n'ime ụlọ ahụ na-akpali mmetụta nke iri nri n'ime oke osisi achara.
Ụlọ Zen Mood bu atumatu echiche a gbadoro ukwu n’ime ndi isi ugbo ala ato: Minimalism, imeghari, na ihe omumu. Ndi mmadu n’otu n’otu na ekeputa otutu uzo ha di ha na ha, ha nwere ike imeghari ulo, office ma obu ebe nlere iji anya abuo. Ejiri usoro 3.20 x 6.00m mee ihe na 19m² n'ime 01 ma ọ bụ ala 02. A na-ejikarị ụgbọ mmiri eme njem, a ga - ebunye ya ma wụnye ya n'ime naanị otu ụbọchị. Ọ bụ atụmatụ pụrụ iche, nke oge a na -emepụta oghere dị mfe, na -ebi ndụ ma na -eme ka emee ka ọ dịrị site na usoro dị ọcha ma nke emebere ngwa ọrụ.
Ụlọ Ihe mmuta ulo akwukwo a sitere na osisi eucalyptus achoputara nke “bateas”. Ndia bu uzo eji eme umu agbogho n’ebusa a mejuputara ulo oru ime obodo “Ria da Arousa”, Spain. A na-eji osisi eucalyptus eme ihe na usoro ndị a, ma enwere mgbatị nke osisi a na mpaghara. E zoro afọ nke osisi ahụ, ihu ya na ihu ya dị iche iche iji mepụta ụda dị iche iche. Trieslọ ahụ na-anwa ịgbaziri ọdịnala gburugburu ahụ ma kpughee ya site na akụkọ a kọrọ n'ime okike na ịkọwa ya.
Ụlọ Obibi Ụlọ Akwụkwọ Cifi Donut Ụlọ Oriri Na Ọ Restaurantụ Isụ Restaurantlọ Oriri Na Ọ Jaụụ Japan Na Ụlọ Mmanya Ụlọ Ụlọ